दाङ कोरोना अस्पतालमा १३ जनाको उपचार हुँदै, सबैको अवस्था सामान्य – Kanika Khabar
दाङ कोरोना अस्पतालमा १३ जनाको उपचार हुँदै, सबैको अवस्था सामान्य
Kanika Khabar ३ जेष्ठ २०७७, शनिबार २१:०३ May 17, 2020 मा प्रकाशित
दाङ बेलझुण्डिस्थित प्रादेशिक कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारत सबै संक्रमितमा कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन । यो अस्पतालमा १३ जना संक्रमितको उपचार भैरहेको छ । दाङ सहित बाँके र कपिलवस्तुका १३ जनाको यो अस्पतालमा उपचार भैरहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. सर्वेश शर्माका अनुसार बिरामीहरु सबैको अवस्था समान्य छ । शर्माका अनुसार दाङका २, बाँकेका ८, र कपिलवस्तुका ३ जनाको उपचार भैरहेको छ । उनीहरु सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ । अस्पतालका निमित्त सुपरिटेण्डेन्ट डा. सर्वेश शर्माले अनुसार कुनै पनि बिरामीमा कोरोनाको लक्षण नदेखिएको र सबैको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए । ‘उहाँहरु कसैमा पनि कोरोनाको लक्षण देखा परेको छैन, सबैको अवस्था सामान्य छ ,’ उनले भने ‘उहाँहरु बिरामी भएर चेकजाँच गरिएको नभई संक्रमणको आशंकामा गरिएको परीक्षण भएकाले लक्षण देखा नपरेको हो ।’ यो अस्पतालमा भने दाङमै शुक्रवार फेला परेका दुई जना सहित शुक्रबारै बाँके र कपिलवस्तुमा भेटिएका बिरामीहरुलाई ल्याईएको थियो ।
दाङमा अन्यत्रबाट बिरामी ल्याईँदा जिल्लाबासीमा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भन्दै यसअघि जिल्लामा विवाद समेत भएको थियो । तर पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशका जुनसुकै जिल्लाबाट बिरामी ल्याएर उपचार गर्ने निर्णय गरेपछि यो अस्पतालमा अन्य जिल्लाबाट बिरामी ल्याएर उपचार थालिएको हो । यसअघि यो अस्पतालमा कोरोना संक्रमित आशंका गरिएकाहरुलाई आईसाेलेसनमा राख्दै आईएको थियो । तर अब बिरामीहरुलाई उपचार गरेर राख्नु पर्नेभएकाले संकास्पदहरुलाई भने नराखिने डा. शर्माले जानकारी दिए । ‘संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरु नआउँदासम्म हामीहरुले शंकास्पदहरुलाई राख्दै आएका थियौँ,’ उनले भने ‘तर अब बिरामीहरुको उपचार गर्नुपर्ने भएकाले शंकास्पदहरुलाई राखिने छैन ।’